Kenya oo sii deysey dadkii lagu tuhmay weerarki bambaanada, iyo al-Shabaab oo beenisay in ay ku lug lahayd
Maarso 13, 2012
Madaxda Kenya ayaa Isniintii (12-ka March) si shuruud ku xiran ku sii daayey afartii qof ee loo xiray tuhunkii la xiriirey weerarradii bambaanooyinka ee diley lixda qof isla markaana dhaawacacay 60-ka ee Sabtidii Nayroobi ka dhacay, qareenka dadkii la tuhunsanaa ayaa sheegay. Qodobbo la xiriira
Dawladda Kenya oo al-Shabaab ku eedaysay weerarradii bambaanooyinka
Bilayska Kenya oo aqoonsaday qofka lagu tuhamayo weerarkii kaniisadda
Afarta qof ayaa su’aalo la weydiiyey laguna amray in dib loogu soo celiyo bilayska lidka argaggixisada maalinka Talaadada, sida uu sheegay qareen Chacha Mwita. Wuxuu kaloo sheegay in loo diidey in uu la xiriiro macaamiishiisa oo aan weli dacwo lagu soo oogin. Mid ka mid ah dadka arrintan loo haysto, Sylvester Opiyo, ayaa ku jiran liiska bilayska ee dadka la doon-doonayo, waxaana lagu tuhunsanaa in uu xiriirro la leeyahay al-Shabaab iyo saaxiibbadeeda Kenya. Saddexda tuhmane oo kale ayaa ah dad aan qaangaar ahayn. Iyadoo ay ciidamada Kenya al-Shabaab kula dagaallamayaan Soomaaliya, ayaa kooxda argaggixisada ah lagu eedeeyey in ay Kenya ka qoranayaan dhallinyaro weerarro geysata.
Al-Shabaab ayaa, si kastaba ha ahaatee, beenisay in ay ku lug lahayd weerarkaa bambaanada. “Al-Shabaab waxba kuma laha bambaanooyinka lagu weeraray Nayroobi,” ayuu yiri Sheekh Maxamed Ibraahim oo u hadlay al-Shabaab. Yeelkeede, Sheekh Ibraahim meesha kama saarin weerarro kale oo musatqbalka ay qaadaan. “Maalin ayaa jiri doonta aannu weerari doonno magaalooyinkooda haddii ay gardarrada sii wadaan,” ayuu Ibraahin ku yiri AFP-da. Ma jeclaysatay maqaalkan?
Beelo Soomaaliyeed oo heshiis ku saxiixay Afgooye
Odayaal dhaqameed ka soo jeeda labo qabiil oo isku diriraya gobolka Shabeellaha Hoose ee Soomaali...
Ilaaliyayaasha deegaanka oo ku kulmay Kenya si ay uga wadahadlaan ilaalinta wiyisha
Ilaaliyayaasha deegaanka iyo culimada sayniska ayaa ku kulmay Kenya Talaadadii (27-kii January) s...